Qiimaha tamarta ee lagu wado matoor koronto in ka badan toban sano waa ugu yaraan 30 jeer qiimaha asalka ah ee iibsiga. Iyadoo isticmaalka tamarta uu mas'uul ka yahay inta badan nolosha oo dhan, Marek Lukaszczyk oo ka tirsan mootada iyo soo saaraha wadista, WEG, wuxuu sharxayaa shan siyaabood oo lagu wanaajiyo waxtarka tamarta mootada. Tan ...
Suuqa Gawaarida Asynchronous si kor loogu qaado dakhliga aragtida wanaagsan
Noocii ugu dambeeyay ee daraasadda suuqa 2020 ee Suuqa Asynchronous Motor oo ka kooban 103 oo ay kujiraan miisaska xogta suuqa, jaantusyada, jaantusyada, iyo jaantusyada kuwaas oo si fudud loo fahmi karo iyadoo lagu soo bandhigay falanqeyn qoto dheer. Cudurka Coronavirus Pandemic (COVID-19) wuxuu saameeyey dhinac kasta oo nolosha adduunka ah. Tani waxay le ...
Zhejiang Lijiu Motor Co., Ltd. (hadda kadib loogu yeero "Zhejiang Lijiu Motor") wuxuu ku yaalaa Taizhou, Zhejiang, oo ah halka ay ku taalo dhaqaalaha gaarka loo leeyahay. Ku tiirsanaanta wareegga dhaqaalaha ee ballaaran ee Yangtze River Delta, deegaanka juqraafi ahaan ayaa ka sarreeya. Kaliya waa 2 ...